Faah faahin:- Wariye C/maalik Muuse Coldoon oo lagu xiray garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Wariye C/maalik Muuse Coldoon oo lagu xiray garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa
Ciidanka booliska maamulka Somaliland ayaa maanta garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa ku xiray wariyaha Soomaaliyeed ee caanka ah C/maalik Muuse Coldoon, kadib markii uu saakay kasoo dhoofay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Wariye C/maalik Muuse Coldoon oo maalmihii ugu dambeysay howlo shaqo u joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa halkaasi kula kulmay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo siyaasiyiin kale.
Illaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa xariga wariye C/maalik Muuse Coldoon, balse waxaa loo maleeynayaa in xarigiisa ay la xiriirto safarka magaalada Muqdisho iyo la-kulanka siyaasiyiinta Soomaalida ee uu ka mid yahay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Ciidanka booliska garoonka Cigaal ee magaalada Hargreysa ayaa gacanta ku dhigay wariye C/maalik, islamarkii uu garoonka kasoo degay, wuxuuna xilligaasi kusii jeeday gurigiisa ku yaala magaalada Burco, oo uu deegaan ahaan kasoo jeedo.
Dhinaca kale, wariye C/maalik Muuse Coldoon ayaa la sheegayaa in loo kaxeeyay saldiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo illaa iyo haatan aan la shaacin sababta loo xiray iyo waxa uu xarigiisa la xiriiro.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay uu maamulka Somaliland xabsiga dhigo wariye C/maalik Muuse Coldoon iyo wariyeyaal ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi, iyadoona arrinkaan ay muujineyso in maamulkaasi uu caburin aad u xoogan ku haayo sxaaafadda madaxa banaan ee ka howl-gasha deegaanadaas.